यी ३ महिनामा जन्मनेहरु हुन्छन् धेरै भाग्यमानी, सधैँ दिन्छ भाग्यले साथ ! – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / यी ३ महिनामा जन्मनेहरु हुन्छन् धेरै भाग्यमानी, सधैँ दिन्छ भाग्यले साथ !
admin July 31, 2021 धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 139 Views
फरक-फरक महिनामा जन्मने व्यक्तिको भाग्य र व्यवहार पनि छुट्टै-छुट्टै हुन्छ। यसरी भाग्य र व्यवहार फरक-फरक हुनुमा ग्रहहरुको प्रभावको विशेष भूमिका हुन्छ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार ग्रहहरुको शुभ प्रभाव भएको समयमा जन्मने व्यक्तिहरु धेरै नै भाग्यमानी हुन्छन्। सामान्यतया निम्न तीन महिनामा जन्मने व्यक्तिहरु धेरै भाग्यमानि हुन्छन्।
ज्योतिषका अनुसार, जुन महिनामा जन्मेका मानिसहरू आर्थिक हिसाबले धेरै भाग्यशाली हुन्छन्। यी व्यक्तिहरूले कम मेहनत गरेर पनि धेरै पैसा कमाउँछन्। यो विश्वास गरिन्छ कि यस महिनामा जन्मेका मानिसहरू आत्मविश्वासले भरिएका हुन्छन् र भाग्य सधै उनीहरूको साथ हुन्छ।
ज्योतिषका अनुसार फेब्रुअरीमा जन्मेका मानिसहरू धेरै भाग्यशाली हुन्छन्। फेब्रुअरी महिनामा जन्मनेहरू भाग्यमा धेरै धनी हुन्छन्। यो विश्वास गरिन्छ कि यस महिनामा जन्मेका मानिसहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन। भाग्यवस, तिनीहरूले सबै खुशी प्राप्त गर्दछन् जुन उनीहरू सँधै खोजिरहेका हुन्छन्।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा जन्मेका मानिसहरूको किस्मत धेरै बलियो हुन्छ। यस महिनामा जन्मेका मानिसहरूले आफ्नो भाग्यले उच्च पद प्राप्त गर्छन्। काम होस् अथवा व्यवसाय, यस महिना जन्मनेहरु धेरै प्रगति हुन्छन् र हरेक समय अगाडी बढ्छन्।
Previous काठमाडौंमा आज यस्ता दुई ब्याक्तिलाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ, थियो लामो समय देखि प्रखाई
Next के तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक